ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : Mother's Day
ဘုရားပန်းတင်ဖို့လိုက်ရှာတယ်။ ဒီနေ့Mother's Day ဆိုတော့ ပန်းစည်း လှလှတွေ တွေ့မလားဆိုပြီး ကြည့် မိတယ်။ Economy cut လုပ်နေတဲ့အစိုးရကြောင့်လား၊ တရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ VAT နဲ့လောင်စာဆီကြောင့်လား မသိ။ အားလုံးဈေး ကြီးနေတာပါဘဲ။ နှင်းဆီပန်း အနီတစ်စီး ဝယ်လိုက်တယ်။ ပန်းစည်း လှလှတွေ လဲ အရင်နှစ်တွေကလို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တေ့ာ ၁၁နာရီခွဲ ပြီ မွန်းမတည့် ခင် ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ် ပန်းကပ် ဆီမီးပူဇော် ရေချမ်းကပ် လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ကောင်းသော အမေများနေ့ ပါ။ အဝေးမြေမှ မိခင် ကျန်းမာပါစေ လို့ဆု့တောင်းတယ်။
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, April 03, 2011
...အလင်းစက်မျာ3းApril 2011 at 17:05
ဟ ဒိနေ့Mother's Day ဟုတ်လို့ လားဟေ... ငါတောင် အမေ့အကြောင်း ပိုစ့် ပြန်တင်ဖို့လုပ်မိသေး။ လိုက်မေးကြည့်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုလို့တစ်ခြားပိုစ့်တင်လိုက်တယ်။ ပုံတွေ မမြင်ရဘူးဟာ... တနေကုန် ပြုတ်ကျလိုက် ပြန်တက်လိုက်၊ စက်က ဒေါင်းသွားလိုက်နဲ့အမျိုးကိုစုံနေတာပဲ။။။။။။။။။။။။။
ရိုးရို3းApril 2011 at 18:28
UK mother's day is three weeks before Easter Sunday. I am sure today is mother's day here.
ရိုးရို3းApril 2011 at 23:01
ဦးစ မှာ တော့ အမေများနေ က on the second Sunday in May လို့ ဖတ်ရတယ် ဖိုးတက်ရေ။ အူကေ ကတော့ ယနေ့ပထမ Sunday in April3weeks before Easter တဲ့ ဟ။